Muuri News Network » XOG: MD Xasan Sheekh oo qiray arrin uu qarin jiray..
XOG: MD Xasan Sheekh oo qiray arrin uu qarin jiray..
Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan Magaalada Abu Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta, ayaa sheegay in DFS ay u muuqato kaliya in Maleeshiyaadka Al-shabaab ay kula xaajooto miiska wadahadalka.
Xassan oo Khudbad dheer ka jeediyay shirka Ganacsiga Caalaamiga ee “The Global Business Forum” ayaa sheegay in DFS aysan xiligaani diyaar u aheyn in caqabad waliba ay xal uga dhigto dagaal iyo is hortaag waxa uuna shirkaasi ka sheegay inay diyaar u yihiin Al-shabaab ay la furaan wada hadal si loo soo afjaro khilaafka Siyaasadeed ee kala dhexeeya.
Waxa uu sheegay in Al-shabaab ay sii kordheyso sana jirkeeda, balse ay Dowlada Somalia waxaasi u muuqan islamarkaana ay xal u aragto in Al-shabaab ay kasoo dabcaan mowqifkooda ah dagaalka.
Nuqul kamid ah haddalka Madaxweyne Xassan ayaa waxaa kamid ahaa’’ “Dowlada Somalia qorshaha uguma jiro in qori caaradiisa ay ku bilowda dagaalka Al-shabaab iyo inay abuurto colaad, Dowlada waxa ay maslaxad u aragtaa in khilaafka iyo tabashada Al-shabaab lagu xaliyo miiska wadahadalka oo aysan dagaal xal u arag’’
Madaxweyne Xassan waxa uu qiray inay mar hore natiijo ka gaaren la-xaajoodka Al-shabaab, iminka ay doonayaan inay dhameystiraan rajada laga qabo wada xaajoogka.
Madaxweynaha waxa uu sidoo kale cadeeyay in DFS ay heshiis qarsoodi ah iyo mid muuqdaba ay la gashay Saraakiil waaweyn oo ka tirsanaa Al-shabaab, kuwaasi oo dib ugu soo laabtay xaalladda caadiga, sida uu hadalka u dhigay.